JINGHPAW KASA: ဇန်န၀ါရီ (၁၀) ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်ဗိုလ် နှစ်ဦးကျ
ဇန်နဝါရီ (၁၁) သောကြာ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော မြစ်ကြီးနား - လိုင်ဇာလမ်း နန့်ဆန်ယန် နှင့် မဒီးယန် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာစစ်တပ်များကို ဇန်န၀ါရီ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ အဝေးထိန်း မိုင်းများဖြင့် တိုက်ခိုက်ရာ ဗမာစစ်တပ်မှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး တစ်ဦး၊ ဗိုလ်ကြီး တစ်ဦး နှင့် စစ်သား (၁၀) သေးဆုံးကြောင်း သတင်းသိရှိရပါသည်။ ဗမာစစ်တပ်မှ အရာရှိကြီးများ ကျဆုံးသွားသောကြောင့် ဇန်န၀ါရီ (၁၁) ရက်နေ့ ပြန်လည် ထိုးစစ် လာသောကြောင့် တိုက်ပွဲများ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။
Burmese Government’s junior colonel, (1) captain and (10) soldiers were killed in near Nam San Yang and Ma Di Yang village on 10th January, 2013. According to KIA front line officer report, the Burmese intruder troops launched an offensive from Nam San Yang and Ma Di Yang, which are on the Myitkyina – Laiza road, and it is under KIA (5th) brigade area, KIA patriotic soldiers used remote controlled mine to prevent the offensive action. Due to killing of Burmese Government high rank officer, the battle became again dreadfully in that area from 11st January.
ကချင် ပြည်နယ်နေ.အတွက် ယစ်ပူဇော်ပစ်လုကိပြီ
grai kaja ai, dai sa wa myen si u, tsai hkra anut ga wunpawng an nau ni
nyi aung said...